Robertson Iyo Alexander-Arnold Oo Loo Magacaabay Xiddigaha Baalaha Difaaca Ee Ugu Wanaangsan Dunida – Gool24.Net
Robertson Iyo Alexander-Arnold Oo Loo Magacaabay Xiddigaha Baalaha Difaaca Ee Ugu Wanaangsan Dunida
18/05/2020 Abdiwahab A. Abeye
Labada baalood ee difaaca Liverpool ee Alexander-Arnold iyo Andy Robertson ayaa loo magacaabay ciyaaryahannada ugu wanaagsan waqtigan ee ka ciyaara boosaskaas ee waliba isku kooxda ah.
Robertson iyo Alexander-Arnold ayaa qayb weyn kasoo qaatay guulihii ay Liverpool gaadhay xili ciyaareedkan iyo midkii horeba, waxaana bandhiggooda difaac ay kaga sii sarreeyeen weerar-geynta kubadda iyo caawinta ay sameeyeen.
21 jirkan reer England ee Alexander-Arnold ayaa xili ciyaareedkan loo diiwaangeliyey rikoodhkii ugu sarreeyey ee caawinta ciyaartoy difaac ah, waxaanu naadigiisa siiyey 13 kubbadood oo goolal noqday iyo waliba laba uu isagu dhaliyey.
Andy Robertson ayaa sidaas oo kale muhiim uga ahaa afka hore, waxaanu sameeyey toddoba caawimood iyo laba gool oo uu dhaliyey.
Laacibkii hore ee Jose Enrique ayaa labadoodan ku tilmaamay ciyaaryahannada difaaca garbaha ee ugu fiican dunida, isaga oo si gaar ah u xusaya Robertson na waxa uu yidhi: “Xaqiiqdii, labadii sannadood ee ugu dambeeyey wuxuu ahaa difaaca bidix ee ugu wanaagsan. Aniga fikirkayga, wuxuu leeyahay wax walba, tamarta ku jirta ayaa ku daalinaysa marka aad eegto mararka qaarkood kulamada dhexdooda. Inta jeer ee uu hore u baxo ama soo laabto, ma rumaysan kartid.
“Waxaan jecelahay sida adag ee uu u ciyaaro oo sidoo kale aan la rumaysan karin, waxaanu sameeyaa wax-soosaar ay keenaan kubbadaha cajiibka ah ee uu dhinacayada ka keeno.
“Si fiican ayuu u difaacaa, waxaanan aaminsanahay inuu yahay difaaca bidix ee ugu wanaagsan dunida labadii sannadood ee ugu dambeeyey.”
Enrique waxa uu intaas kaddib ka hadlay Alexander-Arnold oo isagana uu sheegay inuu yahay laacibka ugu fiican difaaca midig, waxaanu yidhi: “Kaliya waa 21 jir, bal qiyaas sida uu horumar u samayn karo.
“Dad badan ayaa doonaya inay ogaadaan sida uu khadka dhexe uga ciyaari lahaa, laakiin anigu waxaan leeyahay, maxaa looga beddelayaa halka uu ka ciyaaro mar haddii uu waqti horeba yahay xiddiga ugu fiican booskiisa?”